CSV Explorer: Ku shaqee Faylasha waaweyn ee CSV | Martech Zone
CSV Explorer: Ku shaqee Faylasha waaweyn ee CSV
Isniintii, September 28, 2020 Isniintii, September 28, 2020 Douglas Karr
Faylasha CSV waa aasaas waxayna caadi ahaan yihiin hooseeyaha ugu hooseeya ee soo dejinta iyo dhoofinta xogta nidaam kasta. Waxaan la shaqeyneynaa macmiil hadda leh xog ururin aad u ballaaran oo xiriir ah (in ka badan 5 milyan oo rikoor) waxaana u baahanahay inaan kala shaandheynno, weydiino, oo aan dhoofino qeyb ka mid ah xogta
Waa maxay faylka CSV?
A qiyamka kala-jajabnaanta comma faylka waa feyl qoraal xaddidan oo u adeegsanaya jajab si loo kala saaro qiimaha. Khad kasta oo faylka ka mid ah waa diiwaanka xogta. Diiwaan kastaa wuxuu ka kooban yahay hal ama in ka badan oo beero ah, oo lagu kala gooyay koomayaal. Isticmaalka jajabku sida kala-soocida aagga ayaa ah isha magaca qaabkan faylka ah.
Qalabka Desktop sida Microsoft Excel iyo Google Sheets waxay leeyihiin xayiraad xog.
Microsoft Excel waxay soo dejin doontaa xirmooyinka xogta ilaa 1 milyan oo saf iyo tiirar aan xadidneyn oo ku dhex jira xaashiyaha. Haddii aad isku daydo inaad soo dejiso wax ka badan intaas, Excel waxay muujineysaa digniin sheegeysa in xogtaada la jaray.
Lambarrada Apple waxay soo dejineysaa astaamo xog oo gaaraya ilaa 1 milyan oo saf iyo 1,000 tiir oo loo maro xaashiyaha. Haddii aad isku daydo inaad soo dejiso wax ka badan intaas, Lambaradu waxay muujinayaan digniin sheegaya in xogtaada la jaray.
Waraaqaha Google waxay soo dejin doontaa aaladda xogta oo leh ilaa 400,000 oo unug, oo ugu badnaan 256 tiirarkiiba ah, illaa 250 MB.
Marka, haddii aad ku shaqeyneyso feyl aad u ballaaran, waa inaad ku soo gelisaa xogta hal keey xogta. Taasi waxay u baahan tahay barxad xog-ururin iyo sidoo kale qalab wax lagu weydiiyo si loo kala saaro xogta. Haddii aadan rabin inaad barato luuqad wax weydiinaysa iyo madal cusub… waxaa jira meel kale!
CSV Explorer waa aalad fudud oo khadka tooska ah kaa caawinaysa inaad soo dejiso, weydiiso, qayb, iyo dhoofinta xogta. Nooca bilaashka ah wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ku meel gaar ah ula shaqeyso 5ta milyan ee safka hore. Noocyada kale waxay kuu oggolaanayaan inaad keydiso xog uruurin dhan 20 milyan oo saf oo aad si fudud kula shaqeyn karto.
Waxaan awooday inaan soo dhoofiyo in kabadan 5 milyan oo rikoor maanta ah daqiiqado gudahood, anigoo si fudud xogta u weydiya, oo aan dhoofiyo diiwaanada aan ubaahanahay. Qalabka wuxuu u shaqeeyay si bilaa cillad ah!
Astaamaha CSV Explorer Ku dar
Xog Weyn (ama Caadi ah) - Dhowr saf ama dhowr milyan oo saf, CSV Explorer wuxuu ka dhigayaa furitaan iyo falanqeyn feylasha waaweyn CSV deg deg ah oo fudud.
Maaraynta - CSV Explorer waa fududahay in la isticmaalo. Dhowr guji, shaandhee, raadi, oo isdabamari xogta si aad uga hesho irbadda ku jirta cawska ama aad u hesho sawirka weyn.
dhoofinta - CSV Explorer wuxuu awood kuu siinayaa inaad weydiiso oo aad dhoofiso faylasha - xitaa waxaad ku kala bixineysaa feylasha tirada diiwaanada aad mid walba ka rabto.
Muuqaal & Isku xir - Xogta shirqoolka, keydi jaantusyada bandhigyada, ama u dhoofi natiijooyinka Excel si aad uhesho falanqayn dheeri ah.
Ka bilow CSV Explorer
Tags: Qiimayaasha kala-jajabnaanta commaCSVsahamiyaha csvDatasareWaraaqaha Googledatasets waaweyn
Hopin: Goob Caan Ah Oo Loogu Kaxeeyo Ka Qaybgalka Dhacdooyinkaaga Internetka